कोरोनासँगको लडाइँमा सुदूरपश्चिम ‘भाग्यमानी’ हो? – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख २१ गते १५:३८
नेपालमा पहिलो पटक माघ ९ गते कोरोना संक्रमित भेटिए। कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहानबाट आएका २२ वर्षीय युवक टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा उपचार गराएर माघमै डिस्चार्ज भए। त्यसपछि एक महिनासम्म नेपालमा कोरोना संक्रमित फेला परेनन्।
ठ्याक्कै एक महिनापछि चैत १० गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै कतार एयरवेजको विमानमा आएकी १९ वर्षिया युवतिमा कोरोनाको संक्रमण देखियो। उनी चैत ४ गते नेपाल आएकी थिइन्।
त्यसपछि नेपालमा क्रमिक रुपमा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै गयो। र, कोरोना जोखिमको हट स्पटको रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश बन्न पुग्यो। किनकी सुरुआति दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच जना संक्रमित भेटिए। नेपालको चौथो संक्रमित धनगढीका ३४ वर्षिय पुरुषमा चैत १४ मा कोरोना पोजेटिभ देखियो।
चैत २२ मा एकै दिन तीन जना संक्रमित थपिए। बैशाख १ गते फेरि एक महिलामा कोरोना पोजेटिभ देखियो। चैत १४ गतेदेखि बैशाख १ गतेसम्म यसरी सुदूरमा पाँच जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै संक्रमित थपिन थालेपछि सुदूपश्चिम प्रदेश उच्च जोखिमा देखियो। अर्को कुरा सुदूरपश्चिमबाटै नेपाल कोरोना संक्रमण दोस्रो फेजमा पुग्यो।
चैत १४ मा कारोनामा पुष्टि भएका नेपालका चौथो संक्रमितकी भाउजुमा चैत २२ मा कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपाल दोस्रो फेजमा गयो। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि यसले अब भयावह रुप लिन्छ भनेर आकलन हुन थालेको थियो।
आठ जना संक्रमितको अस्पतालमा उपचार भइरहेको समयमा सुदूरपश्चिमका मात्रै चार संक्रमित उपचार रत थिए। बैशाख १ गते यता सुदूरपश्चिममा कुनै संक्रमित देखिएका छैनन्। उच्च सतर्कताका साथ अगाडि बढेको सुदूरपश्चिमले संक्रमित भएका मध्ये चार जना निको भएर घर फर्किसकेकाले आफूलाई भाग्यमानी सावित गर्दै अगाडि बढिरहेको छ।
स्वास्थ्य सुविधाबाट निकै पछाडि रहेको, प्रयाप्त चिकित्सक, आइसुलेसन, भेन्टिलेटरलगायतका सुविधा एकदमै कम भएको प्रदेशमा कोरोनाले भयावह रुप लिएको भए नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो हुने आकलन गरिएको थियो। स्वयम् प्रदेश सरकार पनि यसप्रति चिन्तित थियो।
अब थप केही दिनसम्म कुनै केस नदेखिए हामी खुशी हुँदै जानुपर्छ। तर, परिक्षणको दायरालाई भने बढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘समाजमा कुनै एक जनामा पनि लुकेर रहेको छ भने त्यसले फेरी महामारीको रुप लिने जोखिम हुन्छ। त्यसैले अब समुदाय स्तरमै पुगेर परिक्षण गरिनुपर्छ।
सुरुमा कुनै तयारी नगरेर सेती प्रादेशिक अस्पतालाई कोरोनाको उपचारका लागि तोकेको प्रदेशले अहिले त कैलाली र कञ्चनपुरमा कोरोना अस्पताल पनि निर्माण गरिरहेको छ। भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिसको आवागमन हुने भएकाले पनि प्रदेश सरकार निकै चिन्तित थियो।
अब मनोबल बढेको छ, जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं : सामाजिक विकास मन्त्री
भारतबाट आएका मानिसबाट भयावह अस्था सिर्जना हुने आकलन गरेको प्रदेश सरसकारले सबै स्थानीय निकायलाई बाहिरबाट आउने सबै नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न निर्देशन दियो। स्थानीय निकायले पनि लकडाउनपछि आएका सबै नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखे। उनीहरूको स्वास्थ्य परिक्षण गरियो। १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बिताए।
कोरोना पोजेटिभ देखिएकाहरू अस्पताल पुगे। क्वारेन्टाइनमा १४ दिन विताएकाहरू घर फर्किए। विस्तारै प्रदेशको अवस्था सामान्य बन्दै गयो। कुनै बेला देशकै रेडजोनमा रहेको प्रदेशमा अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि प्रदेश सरकार हौसिएको छ।
सबैको साथ र सहयोगले सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदिले बताए। उनले पछिल्लो समय प्रदेश सरकार भारतको सीमावर्ति क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने कार्यमा जुटिरहेको उनको भनाई छ।
‘अहिले नयाँ संक्रमित नदेखिएको अवस्थामा हामी हौसिएका छौं। अब कुनै केस देखिए हामी सहजै हेन्डलिङ् गर्न सक्छौं। पछिल्लो समय केन्द्र सरकारबाट पनि राम्रो सहयोग भइरहेको छ’, उनले भने।
शुक्रबार मात्रै सुदूरपश्चिमका बैतडि नाकाबाट १२ सय ८८ जना र दार्चुला नाकाबाट १८ सय ९६ जना नेपालीलाई नेपाल ल्याइएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यसरी आएका नागरिकलाई १४ दिनसम्म स्थानीय क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडिटी परिक्षण गरेर मात्रै घर पठाउने नितीका साथ अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय निकायलाई सोही निर्देशन दिएको मन्त्री सुवेदीले बताए।
उनले अहिले प्रदेश सरकारले कोरोना अस्पताल निर्माण गरिरहेको र त्यसका लागि आवस्यक चिकित्सकीय सामग्रीको जोहो पनि गरेर राखेको बताए। ‘अहिले नयाँ संक्रमित नदेखिएको अवस्थामा हामी हौसिएका छौं। अब कुनै केस देखिए हामी सहजै हेन्डलिङ् गर्न सक्छौं। पछिल्लो समय केन्द्र सरकारबाट पनि राम्रो सहयोग भइरहेको छ’, उनले भने।
अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन: चिकित्सक
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारको मोर्चा सम्हालेका डा. जगदिश जोशी पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको अवस्था सामान्य बन्दै गए पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनले भारतलगायत अन्य देशबाट आएका सबै नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण गरिनुपर्ने बताए।
‘अब थप केही दिनसम्म कुनै केस नदेखिए हामी खुशी हुँदै जानुपर्छ। तर, परिक्षणको दायरालाई भने बढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘समाजमा कुनै एक जनामा पनि लुकेर रहेको छ भने त्यसले फेरी महामारीको रुप लिने जोखिम हुन्छ। त्यसैले अब समुदाय स्तरमै पुगेर परिक्षण गरिनुपर्छ।’
सुरुआति दिनमा पिपिईलगायत स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सकको समस्या खेप्नु परे पनि पछिल्लो समय अवस्था सामान्य बन्दै गएको उनको भनाई छ। सुरुमा मनोबैज्ञानिक त्रासदेखि अन्य समस्या खेप्नु परेपनि अहिले स्थिति सहज बन्दै गएको जोशीले बताए।
यस्तो छ पत्रकारको अनुभव
बरिष्ठ पत्रकार दिलबहादुर छल्यालका अनुसार कोरोना संक्रमित देखिएपछि सुरुआति दिनमा सुदूरपश्चिमा उच्च जोखिमका साथै त्रास थियो। करिव डेढ लाखको हाराहारीमा भारतबाट मान्छे आए पनि सबै क्वारेन्टाइनमा नबसेकाले बढी जोखिम रहेको उनको अनुभाव छ।
उनले धनगढीबाटै देश दोस्रो फेजमा जाँदा झन त्यहाँको अवस्था जरजर बनेको बताए। उनले सुरुमा ८ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको अवस्थामा चार जना सुदूरपश्चिममै रहेकाले सबैमा एकखाले त्रास रहे पनि अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएको बताए।
सुरुमा त पत्रकारहरूले पनि जोखिम नै मोलेर समाचार संकलन गरे। ‘धेरैको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको थिएन। ठूलो संख्यामा भारतबाट मान्छे आएका थिए। समाचार संकलन गर्नै पर्ने हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘यस्तो बेलामा जोखिम मोलेरै समाचार संकलन गरियो। कोमापो संक्रमण छ भनेर मनमा एक खाले त्रास भइरहन्थ्यो।’
सुरुमा सुरक्षा सामग्री बिनै पत्रकारले समाचार संकलनमा खट्नुपरेको उनको अनुभाव छ। आफूले पनि सुरुमा माक्स, गल्ब र सेनिटाइजर बिनै रिपोटिङ् गरेको उनले बताए। बजारमा किन्दा नपाइने र प्रदेश सरकारले उपलब्ध नगराएकाले आफूहरूले रिक्स मोलेरै समाचार संकलन गरेको छत्याल बताउँछन्। ‘सरकारले लकडाउन जारी गरिसकेको अवस्थामा हजारौंको संख्यामा भारतबाट आएका नेपालीले गौरिफन्टामा नाराबाजी गरे। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले अग्रमोर्चामै उभिएर समाचार संकलन गर्‌यौं’, उनले भने।
आफूहरूसँग सावधानीका सामग्री अभावले घरबाट निस्किदा सधै डरलाग्ने गरेको उनले बताए। उनले धेरै जनामा संक्रमण देखिए त्यहाँ अस्पताल र चिकित्सकको अभावले उपचार नै सम्भव नहुने भएकाले पनि सुरुमा निकै डर रहेको बताए। तर, अब विस्तारै अवस्था सामान्य बन्दै गएको छत्यालले बताए। उनले अब नाकामा कडाई गरेर सावधानी अपनाउन सकिने अवस्था रहेको बताए।